LG ga - eweputa mobile n’eji ihu n’ile n’aho a Gam akporosis
LG na-akwado ịkwalite ekwentị nwere ihuenyo na-agbanwe agbanwe
Ọ bụrụ na anyị nwere ụbọchị ndị a n'azụ mwepụta nke LG Velvet, ugbua enwere asịrị maka ama ọzọ sitere na ụlọ ọrụ Korea, ọ bụ ezie na ọ ga-abịa n'echiche dị nnọọ iche na ihe anyị na-eji ma na-agbake atụmatụ aghụghọ nke oge Symbian.
Dabere na Korea Herald, LG ga-akwadebe mwepụta nke ekwentị na a n'usoro n'usoro n'usoro ihuenyo maka ọkara nke abụọ nke afọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, otu n'ime atụmatụ ndị ahụ ga-eju anyị anya na ruo mgbe anyị nwere ya n'aka anyị, ọ ga-esi ike ikwere ya.
Este ama a ga-eji nwere abụọ hụ na i meziri nke nwere ike ibugharị kwụ ọtọ. Anyị ga-agarịrị ekwentị mgbe ochie iji hụ ihe yiri ya. Anyị na-ekwu maka ụfọdụ dịka Nokia N93 ma ọ bụ Nokia 6260.
Anyị nwere ike iche n'echiche a ụdị "T" dị ka echiche ọhụụ maka ekwentị ahụ ma na anyị nwere ike ịghọta n’etiti itinye igwe ekwentị na nke si n’etiti anyị nwere onye ọzọ ntanetị na anyị ga-enwe ike ịgbagharị ya.
Nkwupụta a sitere na ndị mgbasa ozi Korea na-ekwusi ike na atụmatụ a na-eji agagharị agagharị bụ okwu ebumpụta ụwa, na ebumnuche ya bụ oriri multimedia na ahụmịhe egwuregwu ka mma. Ọ ga-adị mkpa ịhụ ezigbo echiche ya iji ghọta ya nke ọma ma nwee ike iburu ya ụbọchị ahụ ụbọchị nke mkpanaka n'ụdị "T" dabara adaba n'ezie.
N'otu akụkọ ahụ enwere okwu banyere ọzọ ekwentị na mpịakọta-elu ihuenyo na ihe enwere ike ịhụ na MWC n'afọ ọzọ; Ka anyị nwee olile anya na ihe niile na - aga nke ọma metụtara COVID-19, ebe ọ bụ na n’afọ a ka a ga - akwụsịtụ ngosi na Barcelona.
Thatbụ na ọ nwere ike, Ọ dị ka LG nwere nke doro anya ma chọọ ịbanye n'ime ahịa ahụ nwere ụdị dị iche iche nwere ike ịdọrọ uche ọha mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG na-akwado ịkwalite ekwentị nwere ihuenyo na-agbanwe agbanwe
Samsung Galaxy A21s na-ekpughe nkọwa ọhụrụ mgbe ọ gafesịrị Google Play Console
Site na aghụghọ a dị mfe, ụda nke gam akporo gị mgbe ị na-eji bluetooth ga-aka mma karịa mgbe ọ bụla